Ganacsatada Gaalkacyo oo dayactir ku wada Airporka Cabdullahi Yusuf • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ganacsatada Gaalkacyo oo dayactir ku wada Airporka Cabdullahi Yusuf
Ganacsatada Gaalkacyo oo dayactir ku wada Airporka Cabdullahi Yusuf
Waxaa magaalada Gaalkacyo ka bilowday hawlo dib dayactir loogu sameenayo qeybo kamid ah Airporka magaalada Gaalkacyo, hawshaasi oo ay maalgelinayaan ganacsato kasoo jeeda gobalka Mudug.
Airporka ayaa waxaa hada qeyb kamid ah la saaray laami cusub oo cabirkiisu yahay 1500 mitir, kaasi oo qeyb ka ah wadooyinka diyaaradaha ku socdaan ee Airporka qeybtiisa loo yaqaan (05) oo ahaa laami horey burburay.
Hawshan ay dar darta geliyeen ganacsatada gobalka Mudug ayaa kusoo beegmaysa xili Airporkada Puntland ay si weyn ugu baahan yihiin dayactir xoogleh.
Ganacsatada ayaa ugu baaqay in dowlada Puntland iyo waliba hay’adaha caalamiga ah inay gacan xoogan ka geystaan dayactirka ay hada ku bilaabeen airporka Gaalkacyo ee Cabdullahi Yusuf.
Ururka IS-XIL-QAAN oo ka jira gobalka Mudug ayna ku jiraan Ganacsatada Mudug, ayaa keenay dhamaan Qalabka dayactirka hawshana gacanta ku hayey oo shalay shir jaraa’iid ku qabtay Airporka Gaalkacyo ayaa ugu baaqay Dowlada Puntland inay buuxiso kaalinteeda ku aadan dhismaha Airporka.
Agaasimaha Airporka Gaalkacyo Siciid Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa si gaar ah ugu mahadnaqay Ganacsatada Qaadka iyo Shirkada Blue-Bird oo uu sheegay inay qeyb weyn ku lahaayeen hawsha dayactirka Airporka, isagoo ganacsatada kale ee aan weli ka qeyb qaadan hawsha ugu baaqay inay qeybtooda ka geystaan hawshan muhiimka u ah dhaqaalaha gobalka Mudug.
Hawsha dayactirka ayaa laga bilaabay Airporka Cabdullahi Yusuf bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay 2012, wuxuuna hada marayaa heer gebo gebo ah.
Horey ayey Ganacsatada gobalka Bari dhaqaale xoogleh ugu bixiyeen dhismihii Airporka Bosaaso oo aan isaguna weli la saarin wax laami ah. Dowlada Puntland oo horey u sheegtay inay dhameystiri doonto airporka Bosaaso ayaan illaa iyo hada wax hawl ah ka bilaabin.
Bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay ayey Dowlada Puntland ay sheegtay inay bilaabi doonto hawsha dhismaha Laamiga diyaaradaha ee Bosaaso BanderQasim Airport, hawshaasi oo aan illaa iyo hada waxna laga qaban.[Halkan ka akhriso Warka bishii November]
Airporada Bosaaso iyo Gaalkacyo ayaa kamid ah illaha dhaqaalaha ee ugu waaweyn ee dowlada Puntland ka hesho canshuuraha, marka laga yimaado Dekkada Bosaaso oo ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha Puntland.
SYRIA- Khubarada UN-ka oo sheegay in lagu rasaaseeyey Douma